R/wasaare Kheyre oo kormeeray Xarunta Wasaaradda Warfaafinta (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > R/wasaare Kheyre oo kormeeray Xarunta Wasaaradda Warfaafinta (Sawirro)
R/wasaare Kheyre oo kormeeray Xarunta Wasaaradda Warfaafinta (Sawirro)
March 27, 2018 admin270
Ra’iisul Wasaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali khayre ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku yimid Xarunta Wasaraadda Warfaafinta si uu ugu kuur galo shaqada wanaagsan ee ka socota.
Mudane Xasan Cali Khayre waxaa ku soo dhaweeyey Wasaaradda Wasiirku xigeenka wasaaradda ahna sihayaha xilka wasiirka wasaaradda Warfaafinta Mudane C/rixmaan Iidaan Yoonis, Agaasimaha guud iyo Agaasimayaasha Waaxyaha ee Wasaaradda, isagoo kulan ku saabsanaa is xog wareysi oo ku saabsanaa qorshayaasha hormarineed ay leedahay wasaraadaha la qaatay Masuuliyiintaasi.
Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka Soomaaliiya ayaa kulanka kadib kormeeray qaybaha kale duwan ee Waaxyaha Warbaahinta, isagoona boggaadiyey howlaha shaqo ee warbaahinta Qaranka u heyso Ummadda Soomaaliyeed.
dhanka kale Ra’iisul wasaaraha ayaa kormeeray Wasaaradda Haweenka iyo Xaquul insaanka XFS oo la degan Wasaaradda Warfaafinta, waxaana uu mid mid u kormeeray Xafiisyada ay ku shaqeeyaan shaqaallaha Wasaaradaasi.
Kormeerkaan shaqo ee uu maanta Ra’iisul Wasaaraha Xukuumaddu ku yimid Wasaaradda Warfaafinta ayaa qayb ka ah qorshayaasha lagu fulinayo isla xisaabtanka iyo korjoogteyta oo tiir dhexaad lama taabtaan u ah barnaamijka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Khamri Farabadan oo lagu qabtay dekedda Muqdisho
Soomaaliya oo Dacwad ka dhan ah UAE u gudbisay Golaha Ammaanka
Xuseen Gurguurte isagoo Cuuryaan ah waxaa soo ritey Cudurka Dhiig Karka ee Fadlan Caawi
Xildhibaanada Maamulka Puntland oo Mooshin wadda
Akhriso: Jadwalka Doorashada Madaxweynaha Galmudug